မေငြိမ်း ● မလှပတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ - MoeMaKa Media
Home / Community / May Nyein / မေငြိမ်း ● မလှပတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ
မေငြိမ်း ● မလှပတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ
Community, May Nyein
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၉
ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာပြည်မှာနေတုန်းကတော့ ဒီအမူအကျင့်တွေဟာ ဘာမှမထူးခြားသလို.. အရေးမကြီးသလို ဖြစ်နေပေမဲ့ ဒီဘက် အနောက် နိုင်ငံမှာ နေရတော့မှ.. ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကတဆင့် မသိမသာ သင်ယူရတာ တွေနဲ့ ယှဉ်ကြည့်တော့မှ .. အရိုးစွဲနေတဲ့ တချို့အမူအကျင့်တွေဟာ ရုပ်ဆိုးပါလား လို့ သိခဲ့တာပါ။ အဲဒီအခါ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်.. လှပတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံဖြစ်စေဖို့ အကျိုးရှိတာလေးတွေကို ပြန်မျှဝေချင်ပါတယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ လူနေမှုစနစ် ယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ သဘောမကျစရာတွေလည်း ရှိနေသလို သဘောကျ အတုယူစရာ လေးတွေ ရှိနေတာလည်း သတိပြုစရာပါ။ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကို ကျမကတော့ ကျမရဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသား တွေနဲ့ ကျမရဲ့ သားသမီးတွေဆီကနေ သတိထားမိတာပါ။ အဓိကကတော့ မြန်မာပြည်မှာမွေးခဲ့ပြီး အနောက် နိုင်ငံ မှာ ကြီးပြင်းရတဲ့ ကျမရဲ့ သားသမီးတွေဟာ ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကို သူတို့ရဲ့ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကနေ ရခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်တမ်းတော့ အသေးအဖွဲလေးတွေဆိုပေမဲ့ ဘယ်လောက်ထိ တာသွားတယ် ဆိုတာကို ကျမကိုယ်တိုင် ခုမှ သတိပြုမိလို့ ဝေမျှရတာပါပဲ။
ကျမ - ကြည့်ပါဦး သူဝတ်ထားတာ မလှဘူးနော်.. သူ့အသားရောင်နဲ့ မလိုက်ဘူး။
သမီး - ဘာလို့လဲမေမေ.. မလှဘူးဆိုတာ မေမေက သတ်မှတ်တာ။ သူက လှတယ်လို့ သတ်မှတ်တာ.. သူဝတ်တဲ့ အဝတ်က သူ့ကိစ္စလေ.. သူက ဘယ်သူ့အတွက်မှ ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ သူအဲလိုဝတ်လို့လည်း ဘယ်သူ့ကိုမှ ဒုက္ခမဖြစ်စေဘူးလေ။ သူ့ကို အဲလိုပြောဖို့ မတရားဘူးလေ။ တကယ်လို့ သူသာသိရင် ဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲ။ အဲဒီ မေမေ့စကားကမှ သူ့ကို ထိခိုက်စေတာ။
ဟုတ်ပါတယ်။ ကျမတို့လူ့ဘောင်မှာ ပြောကြတဲ့ အသားမည်း အရဲဆင်ဆိုတဲ့ သူတပါးကို ထိခိုက်တဲ့ စကားတွေကို ကျမတို့ အလွယ်တကူပြောခဲ့ကြတာ။ တခါတလေဆို ကွယ်ရာမှာသာမဟုတ်ဘဲ.. ကာယကံရှင်ကိုတောင် ကျမတို့ ရယ်သလိုမောသလို ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ တကယ်ဆို ကျမတို့က တဘက်သားရဲ့ ခံစားချက်ကို မစဉ်းစားခဲ့ကြပါဘူး။
ကျမ - မေမေက ညီအစ်မတွေထဲမှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးဆိုတော့ သူများတွေ ပြောတဲ့အခါ ငယ်ငယ်ကဆို သိပ်အားငယ်ရတယ်။
သမီး - ရုပ်ဆိုးတာကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်တာလဲ။ ဘယ်နေရာလဲ.. ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ လူတိုင်း တူတူပဲလေ။ သူ့ Genetic နဲ့သူပဲလေ။ ဥပမာ မေမေက သိပ်ချောတယ်လို့ပြောတဲ့ သူတွေကို သမီးက ချောတယ်လို့ မသိဘူး လေ။
ကျမ - ဒါဖြင့် သမီးက ဘယ်သူ့ကို ချောတယ်ထင်လဲ။
သမီး- ချောတာ…။ မသိဘူးလေ.. ချောတာက ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ ဟို .. သမီးက ကြိုက်တာလား.. ကြည့်ကောင်းတယ် ထင် တာလား။
ကျမ - အင်း… ကြည့်ကောင်းတယ်ထင်တာ .. ပေါ့
သမီး - အဲလိုဆို လူတိုင်း တမျိုးစီ ကြည့်ကောင်းမှာပေါ့.. သမီးကြည့်ကောင်းတယ်ထင်တဲ့လူ အများကြီးလေ..
တကယ်လည်း ကျမပတ်ဝန်းကျင်က အမေရိကန်တွေဟာ ကျမသမီးလိုပဲ ရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှတ်ချက် ပြုလေ့ မရှိသလို သိပ်လည်း အရေးတယူ လုပ်ပြောလေ့မရှိပါဘူး။ ကျမ သားသမီးတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ .. လူတစ်ယောက်ရဲ့ သဘာဝကပေးတဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို သူတို့ ထည့်စဉ်းစားလေ့ မှတ်ချက်ပြုလေ့ မရှိပါဘူး။ အထူးသဖြင့် အသားအရောင် .. ကျား မ .. ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့တည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် မှတ်ချက်မပေးသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါမှ ယဉ်ကျေးတဲ့အမူအကျင့်လို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ မြန်မာ့လူ့ဘောင်ထဲက အလေ့အထတချို့ နဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ပါတော့တယ်။
ဒီစာကို ရေးဖို့ ကျမ အင်မတန်ချီတုံချတုံ ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေးမှဖြစ်မယ်လို့သာ ရေးလိုက်ရပါတယ်။
ကျမ ကလေးတွေကို မြန်မာပြည်ကို ပထမဆုံးအလည်ခေါ်ဖို့စီစဉ်ကတည်းက ကျမ တချို့ကိစ္စတွေကို ကြို သင်ရ.. ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ဥပမာ.. ကျမသမီးက အသားညိုတာမို့.. ထွားတာမို့ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေ သူကြုံရနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးမှာ အမေရိကန်တစ်ဝက်ဖြစ်နေတဲ့သမီးကို အမေရိကန်လို မစဉ်းစားမိအောင် ကြိုသင်ထားခဲ့ရပါတယ်။
ကျမ- ကျဲကျဲက အမေရိကန်မှာနေပြီး အသားမည်းတယ်နော်.. ဝလိုက်တာ.. ထွားလိုက်တာ…. (စသဖြင့်) အဲလို ပြောကြရင် သူတို့က ရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် သမီး.. သူတို့က ပွင့်လင်းတာ.. သူတို့ အမြင်ကို ပြောတာနော်။
သမီး - ဒါပေမဲ့ အဲဒီ comment တွေက ပြောခံရတဲ့သူအတွက် ပျော်စရာမကောင်းဘူးလေ.. သူတို့ မသိဘူးလား။
ကျွန်မ - ထွားတယ်ဆိုတာက ကောင်းတယ်လေ.. သမီး ကျန်းမာလို့ .. သန်စွမ်းလို့ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်လေ..
သမီး - နိုး.. အဲလို ပြောဖို့ မလိုဘူးလေ.. ဘာအတွက်လဲ …
ကျွန်မ - ဘာအတွက်မှမဟုတ်ဘူးလေ.. အဲဒါက Kind of greeting ပဲ … မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာ။
သမီး - ရပါတယ် ၊ သမီး စိတ်မဆိုးလို့ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲဒါက သမီးအတွက် သိပ်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ သူတို့သိရင် ပိုမကောင်းဘူးလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျမတို့ဟာ ဘာမှ အရေးမကြီးဘဲ မှတ်ချက်ပေးကြတယ်.. အဲဒီမှတ်ချက်ကို လက်ခံရတဲ့သူ လည်း ပျော်မသွားဘူး.. စိတ်ကသိကအောင့်တောင် ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ ဒါကိုပဲ ကျွန်မ တို့ ပြောလေ့ ရှိနေကြတယ်။ ဘာ အကျိုးရှိသလဲ.. ဘာအတွက်အရေးကြီးသလဲဆိုတဲ့ အဖြေကို ကျွန်မတို့ စဉ်းစားကျင့် မရှိခဲ့ကြ ပါဘူး။
မျိုးရိုးဗီဇ အရ… အသားဖြူ အသားမည်း .. အရပ်ရှည် အရပ်ပု .. ပိန်တယ် ဝတယ်.. ယောကျ်ားဖြစ်တယ်.. မိန်းမ ဖြစ်တယ် .. အထီးဖြစ်တယ် အမဖြစ်တယ်.. မွေးရာပါ ဒုက္ခိတဖြစ်တယ် ကျန်းမာသန်စွမ်းတယ် .. အသက်ကြီးတယ် အသက်ငယ်တယ် ဆိုတဲ့ သဘာဝကိစ္စတွေမှာ ကျမတို့ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့အပေါ် ဘာအတွက် ကျမတို့ မှတ်ချက်ပေးကြမလဲ.. အရေးအရာလုပ်ပြီး ထည့်ပြောကြမလဲ။ ဒါ့အပြင် အရေးကြီးဆုံးကတော့ ဘာမှအရေးမကြီးတဲ့ မှတ်ချက်ကြောင့် ဆိုးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အကျိုးဆက်တစ်ခု ဖြစ်သွားစေနိုင်ရင်… ကျမတို့ ဒါကို ပြောသင့် လုပ်သင့်သလားထိ စဉ်းစားသင့်တာဟာ ယဉ်ကျေးမှုပါပဲ။
သမီး နဲ့ ကျမ ပြောခဲ့ကြဖူးသလိုပါပဲ။ လှတယ်.. မလှဘူးဆိုတာဟာလည်း ကိုယ့်သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ပါပဲ။ ဒါကို ထုတ်ပြောဖို့ လိုသလား မလိုသလားဆိုတာက ထုတ်ပြောရင် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကပဲ အဆုံးအဖြတ်ပါ။
ကြည်အေး ရဲ့ စာတစ်ခုထဲမှာ ပါဖူးပါတယ်။ မိန်းမ တစ်ယောက်ဟာ လှရင်လည်း လှမှ.. မလှရင်လည်း တော်မှ ဖြစ်မယ်..ဆိုတာမျိုး။ အဲလို ကျမတို့ လူ့ဘောင်က သတ်မှတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဖြင့် ယောကျာ်းတစ်ယောက် ကို ရော ဘယ်လို သတ်မှတ်ချက် စံ ရှိပါသလဲ။
ကျမ သဘောထားမှာတော့ လူမှန်ရင် စိတ်ကောင်းရှိဖို့ နဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားရှိဖို့က အခြေခံဖြစ်ပြီး ဒီအခြေခံနဲ့ ပညာဆည်းပူးမှသာ တော်မှန်တဲ့ လူဖြစ်မယ်.. တန်ဖိုးရှိမယ်ဆိုတာပါ။
ရုပ်ရည်အလှအပဆိုတာကတော့ စံသတ်မှတ်ချက်အတိအကျမရှိတာမို့ တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်ဟာလည်း အမျိုးမျိုးပါ။ အရင်ခေတ်က ကိုယ်ခန္ဓာပြည့်ပြည့်ကမှ အလှလို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပေမဲ့ ခုခေတ်ကတော့ ပိန်တာကိုပဲ တန်ဖိုးလို့ သတ်မှတ်တာမို့ရော.. ဒီအလှအပကို ဘာအတွက် အသုံးချမှာလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး တန်ဖိုး သတ်မှတ်တာမျိုးမို့ .. Universal Truth မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲဒါကိုပဲ အရေးတကြီးသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပကတိ တန်ဖိုးတွေကိုပါ ထိခိုက် လာတာကတော့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
ကျမ ကိုယ် ကျမ နဲ့ပဲ ဥပမာပေးပါရစေ။
ကျမ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ် လုံးဝနီးပါး မစားတော့တာ ကြာပါပြီ။ ဝိတ်ကျချင်တာကြောင့်ရော.. ကျန်းမာချင်တာကြောင့် ရောပေါ့။ ကျမ ဝိတ်မကျပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခါတိုင်းလို ဝိတ်တက်မလာတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျမ က Gym လည်း သွားလေ့ရှိတာမို့ ကျန်းမာရေးအတော်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ နှစ်တိုင်းပုံမှန် ကျန်းမာရေးဆေးစစ်တဲ့အခါ ဆရာဝန်က ကျမကို အမြဲ ချီးကျူးပါတယ်.. ဒီအသက်အရွယ်မှာ ကိုလက်စရော.. ဆီးချို.. သွေးချို .. နှလုံး စတဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေ မရှိလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ လူတကာလိုပဲ ကျမ ဝိတ်ကျဖို့ မလွယ်တာကို အတော် စိတ်ညစ်ပါတယ်။ အဝတ်အစားဝတ်တဲ့အခါလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆို တစ်ယောက်ယောက်ကို ကွယ်ပြီး ကိုယ် ဝ နေတာကို ကွယ်ဖို့ အမြဲ ကြိုးစားပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျမက ငယ်ငယ်ကတည်းက လက်မောင်းကြီးတော့ အဲဒီလက်မောင်းကို သိပ်စိတ်ညစ်တာပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အစားအသောက် ဂရုစိုက်.. လေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်တဲ့ကြားကပဲ လက်မောင်းမကျ.. ဝိတ် မကျ ဖြစ်နေတာကို မကျေနပ်ပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအရ ဘာမှ မဖြစ်တဲ့အခါ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလောက်ပဲ သဘောထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝတဲ့ မျိုးရိုးရှိတဲ့ကြားက အသက် ၅၅ မှာ အဲလောက်ကြီး ထိုင်ရခက် ထ ရ ခက် လောက်အောင်မဝ တာ.. ဘာရောဂါမှမရှိတာကိုပဲ ကျေနပ်လိုက်ရပါတယ်။ ခုထိတော့ လင် ယောကျ်ားကလည်း ကိုယ့်ကို နားလည်သူဖြစ်နေသေးတော့ ကျမအတွက် ဝခြင်းက ပြဿနာဖြစ်မလာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့….
တချို့ လင်ယောကျ်ားများကတော့ သူတို့ ဇနီးမယားတွေရဲ့ ဝလာတဲ့ကိစ္စကို အတော်ခံစားကြပါတယ်။ အဲဒီအခါ ဇနီးမယားတွေခမျာ ပိန်ဖို့ ကြိုးစားကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်အရ.. ဒါမှမဟုတ်.. မျိုးရိုးဗီဇ အရ.. ဒါမှမဟုတ် အလုပ်အကိုင်ရဲ့ ဖိစီးမှုအရ ဘယ်လိုမှ ဝိတ်ချမရတဲ့ အခြေနေရှိတဲ့အခါ အဲဒီ အမျိုးသမီး တွေဟာ သိပ်ကို ဒုက္ခများကြရပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ မှတ်ချက်တွေကြောင့်လည်း အဲဒီစုံတွဲမှာ အထိအရှတွေရှိလာပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို မှတ်ချက်ပေးတတ်ကြတဲ့ သဘာဝကြောင့်လည်း အခြေအနေတွေ ပိုဆိုးကုန်တာရှိပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေက Body shaming ဖြစ်သွားလို့ပါပဲ။
အမျိုးသားတချို့ဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ကသာ ဝဖြိုးနေပေမဲ့ အမျိုးသမီးကိုသာ အပြစ်မြင်လေ့ရှိပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေခမျာ.. ပိန်ဆေးသောက်ရ.. တရားလွန်အစားရှောင်ရနဲ့ တချို့ဆို အစာအိမ်ရောဂါတွေတောင် ရကုန်ပါတယ်။ တချို့အမျိုးသားတွေဆို အမျိုးသမီး ဝလာတာကို အပြစ်ပြောလွန်းလို့ ရန်တွေဖြစ်ကြ.. အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ကြတွေ ရှိလာပါတယ်။ အဲလိုနဲ့ အိမ်ထောင်ရေးမှာပါ အက်ရာတွေ ထင်လာပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း ကလေးမွေးရလို့.. စိတ်ဖိစီးမှုများလို့ .. ဟိုမုန်းပြောင်းလဲလို့ .. ကိုယ်အလေးချိန် တက် လွယ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝကို အမျိုးသားတွေ နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေဘက်ကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက်ရော.. ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သဘောကျဖို့အတွက်ရော အားကစားလုပ်တာ အစားအသောက် ဆင်ခြင် တာတွေ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါတွေဟာ အပြန်အလှန်လေးစားနားလည်မှုပေးတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။
ခုတော့ ကျမက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စိန်ခေါ်ပါတယ်။ ကျမ ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်တယ်.. မကျန်းမာစေတဲ့ ကိစ္စ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် နေထိုင် စားသောက် ဝတ်ဆင်တယ်။ ဘာအတွက် ကျမက ဘာကို ရွံ့မလဲ။ ဒါနဲ့ ကျမ အရင်လို ဓာတ်ပုံရိုက်ရင် ကိုယ်တစ်ဝက်ကို မကွယ်တော့ဘူး.. ကျမ မကြိုက်တဲ့ လက်မောင်းကြီးကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် မဖုံးကွယ်တော့ဘူး။ ဘာက အရေးကြီးလဲ ကျမ သိပြီလေ။ အဲဒီအခါ ဝတယ်လို့ မှတ်ချက်ပေးလာရင်လည်း ဘယ်လိုမှ မနေတော့ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ အဲလို မှတ်ချက်တွေဟာ လက်ခံရသူတွေအတွက် ဘယ်လို အကျိုးဆက်ရှိတယ် ဆိုတာကိုတော့ စဉ်းစားဖို့ သတိရသွားစေချင်တာပါပဲ။ ပြီးတော့ ဒါတွေက လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲက မလှပတဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုပဲ မဟုတ်ပါလား။
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉။
မေငြိမ်း ● မလှပတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုများ Reviewed by Aung Htet on 1:28 PM Rating: 5